Geekbench ndepụta nke Samsung Galaxy A70s apụtawo ìhè | Gam akporosis
Geekbench ndepụta nke Samsung Galaxy A70s apụtawo ìhè
Samsung ga-ebupụta ọtụtụ smartphones sitere na Galaxy A nso nso. Firmlọ ọrụ ahụ nwere obi ụtọ banyere ezinụlọ a, yana Galaxy M usoro. N'ezie, nke a bụ eziokwu ngwaọrụ ndị edebanyere aha nke mbụ site na 2020 -nke na-agwa anyị na enwere ọtụtụ nke anyị ga-anata n'afọ na-esote, na mgbakwunye na ndị a ka ga-ahapụ na nke fọdụrụnụ nke a- na nchapu nke ọtụtụ njedebe nke abụọ.
Geekbench bu otu n’ime ihe nlere anya kachasi ike, dika ihe banyere leaks. Ihe nlere anya, site na nyocha nke ule ya, bu ihe mbu nke nwere otutu ndi ozo tupu ha amalite ya. Galaxy A70s bụ otu n’ime ndị a, na, ekele ndepụta nke otu nke na-adịbeghị anya na-ekpughe na nchekwa data nke a benchmark, anyị nwere ike ugbua nwere ụfọdụ ndị ọzọ siri ike echiche nke ihe na-echere anyị.
Dabere na ihe Geekbench kọwara na nchekwa data ya, Samsung Galaxy A70s -smartphone nke akpọrọ 'samsung SM-A707F' ebe ahụ- na-eji nke gam akporo achịcha sistemụ, nke a ga-ahaziri site na ụlọ ọrụ One UI oyi akwa. Nke a ga - abịa karịa atụmatụ karịa ndị Galaxy A70 mbụ
Samsung Galaxy A70s gbagoro na Geekbench
Ihe data ozo egosiputara ya bu ihe ngosiputa nke ekwenti nke gha gha anabata ya n’igwe. Kpọtụrụ, ndị SoC na e depụtara bụ Ngwa mgbaaka mgbaaka 675, otu n'ime chipsets kachasị ọhụrụ nke Qualcomm nwere ike iru oke ọrụ nke 2 GHz.
Samsung Galaxy A70 na-enweta igwefoto abalị nke Galaxy S10 na mmelite ọhụrụ ya
N'aka nke ozo, Galaxy A70s putara na 6 GB Ram na jisiri ike gụọ ihe dị ka 2,365 isi na otu-isi ule na 6,372 na multi-isi ule. Onu ogugu a na-enye ya etiti uzo, aka ala. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ekwenye na nkọwa ndị a niile nke mkpanaka ahụ, ọ bụ ezie na anyị amaghị mgbe, n’ihi na ọ nweghị ihe a maara banyere ụbọchị mmalite ya na nnweta ya n’ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Geekbench ndepụta nke Samsung Galaxy A70s apụtawo ìhè
WiFi Direct: Kedu ihe ọ bụ na otu esi ahazi ya na gam akporo